प्रेम त्रिकोण, के गर्ने?
प्रेम त्रिकोण सधैं एक वास्तविक विषय हो, यद्यपि हाम्रा संसारको रूपमा पुरानो। यो प्राचीन समय देखि विलुप्त भएको छ, समय अनोखी देखि। पुरातन समयमा, यहांसम्म पनि प्रेम त्रिकोण को विभाजन थियो, यो पनि हामीलाई आउनुभयो। त्रिकोणले विभिन्न संयोजनहरू छन्: दुई पुरुष र एक महिला त्रिकोणको माथिमा; दुई महिला र एक जना मानिस। हुन सक्छ हाम्रो समय मा त्यहाँ अन्य विकल्पहरू छन्, तर हामी तिनीहरूलाई छोड्नेछौं। यद्यपि, धेरै हिटरोजुलुलहरूसँग पक्ष-पक्ष सम्बन्धहरू (कम्तीमा एक पटक) छन्।
मनोविज्ञान को दृष्टिकोण देखि प्रेम त्रिकोण - तपाईंको बीच एक राम्रो लाइन को आवश्यक हुनु पर्छ। धेरै मानिसहरू प्रेम त्रिकोणलाई पनि प्रेम गर्छन्, धेरैका लागि आगो खेल्न एक तत्व हो। एड्रेनालाईन फेंकँदै, तिनीहरू सजिलै यस्तै परिस्थितिहरू सहन सक्छन्। अरूहरू चाहँदैनन् वा आफ्नो छनौट गर्न सक्दैनन्। तर यस्तो अवस्था सधैं संदेह, भावना, तनाव संग हुन्छ। दुःखलाग्दो शब्द हो जुन सबैभन्दा सूट हुन्छ।
प्रेम त्रिकोण कहाँ सुरु हुन्छ? प्रेम त्रिकोणको जादू। सम्भवतः पहिलो नजरमा, एक बैठकबाट तिनीहरूले चलेका थिए र उसलाई धोका दिएनन्। सहानुभूति, हरेक महिला प्रकृतिले एक इज्जत हो। मायामा पर्न सक्छ, बिर्सनुस् ...
यदि तपाइँ त्रिकोणहरूको धेरै कथाहरू विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ सुरक्षित रूपमा भन्न सक्नुहुन्छ कि तेस्रो एक अति उत्कृष्ट छ - यो एक नजिकको व्यक्ति हो, ठीक छ, लगभग सधैं। सबैभन्दा खतरनाक प्रतिद्वंद्वहरू छन्: मित्र वा प्रेमिका।
प्रेम त्रिकोण - के गर्ने?
यदि तपाईं अचानक, मौकाबाट, त्रिकोणको माईक बन्नु, उचित स्थितिको आकलन गर्नुहोस्। अनावश्यक भावना बिना। यो युद्धमा कसरी स्थान लिन चाहानुहुन्छ बुझ्न प्रयास गर्नुहोस्। गुलाबी रङका चल्लाहरू लिनुहोस् र तपाईंको जुनूनको विषय हेर्नुहोस्। सायद सावधानीपूर्वक के गर्दैछ, तपाईंले बुझ्नुहुनेछ कि त्यो व्यक्ति जसको तपाईंले भावनाको बारेमा छ भने यसको लायक छैन। र यो वरपर बारी र छोड्न को लागी राम्रो हुनेछ। आफ्नो समय बर्बाद नगर्नुहोस् र के गरिरहनु पश्चात्ताप नगर्नुहोस्।
त्यहाँ हुन सक्ने अवस्थामा हुन सक्छ कि तपाईंको पति र सबैभन्दा राम्रो मित्र मिल्दो हुन्छ। गर्लफ्रेंड पुरुषहरूलाई धेरै आकर्षित हुन्छन्, तिनीहरू तिनीहरूप्रति धेरै आकर्षक हुन्छन्। तर पुरुष, नियमको रूपमा, यस्ता सम्बन्धहरूमा धेरै ध्यान नदिनुहोस्। तिनीहरूको लागि, सम्भवतः यो गम्भीर छैन।
कसरी प्रेम त्रिकोणबाट बाहिर निस्कनु हुन्छ?
त्यस्ता परिस्थितिहरूमा सबै भन्दा सही समाधान आफैँको लागि एकैचोटि समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। प्रवेश गर्न वा संभोग गर्न, जसको साथ रहन को लागी, कसलाई छनौट गर्ने। सायद यो हुनेछैन, मानिसहरूले ढिलाइ गर्न थाले। तिनीहरू निर्णय गर्न इच्छुक छन्। गम्भीरतापूर्वक जान्न वा गम्भीरतापूर्वक समय पास नगर्नु, तपाईलाई भावनाहरू जाँच गर्न आवश्यक छ। तर त्यस्ता परिस्थितिहरूमा, समयले आफ्नै विरुद्ध काम गर्दछ।
आफ्नो पतिको धोखाधडीबारे सिक्न, उसलाई तुरुन्तै धक्का नदिनुहोस्, सम्भवतः यो एक मात्र मामला हो र सबै गम्भीर छैन। उसलाई मौका दिनुहोस्। अनि कुनै पनि अवस्थामा, उनको शर्मनाक कामको बारेमा सम्झना छैन। उसलाई बुझ्न को लागी कि तिमी धेरै प्रिय हो। महिलाहरु पुरुषहरु भन्दा अधिक धैर्य हो। उसलाई माफ गर्नुहोस्। यो दुश्मन भन्दा अधिक भन्दा राम्रो छ। तपाईंको त्रिकोणमा प्रतिद्वंद्वी वा प्रतिद्वंद्वी लुकाउन र यो अन्त्यमा पर्खनेछ भन्ने सोच्नुहोस्। तिनीहरू काम गर्नेछन्। युद्धमा, सबै माध्यमहरू राम्रो छन्। गल्ती गर्न नसक्नुहोस्।
रूटमा, यो प्रकारको त्रासदी पुरा तरिकाले बुझ्न योग्य छैन, सेक्स र प्रेम को भ्रमित अवधारणाहरु समेत। कहिलेकाहीँ हामी वास्तविक भावनाबाट जुनून भेद गर्न सक्दैनौं। त्यो र जुनून को लागि जुनून। त्यो सबै चाँडै हुन्छ, अचम्म, अचानक र बिस्तारै। र हामी हाम्रो फलहरू कटाउन थाले।
प्रेम त्रिकोण तीन धेरै दुखी मानिसहरू हो। अनि सबैजना आफ्नै बाटोमा दुखी हुन्छन्। यस्तो अनुमति नदिनुहोस् वा यस्तो सम्बन्ध सुरू गर्नुहोस्। आफैलाई ख्याल राख्नुहोस्। थप, अधिक डरलाग्दो र भ्रमित। एक दिन, सम्पूर्ण परिस्थिति तपाईंको नियन्त्रणबाट बाहिर आउन सक्छ।
त्रिकोण तब राम्रो हुन्छ जब यो मित्रता हो। अन्य अवस्थामा, तपाई सधैँ तपाईं वा अन्य कुनै व्यक्तिद्वारा नाश गर्न सक्नुहुन्छ।
केटालाई अप्ठ्यारो छ
कसरी मानिसलाई ईर्ष्या बनाउने?
क्याटी होम्सले न्यूयर्क सबवेमा एक न्यान लिनुभयो
एक केटा को लागि फर्नीचर - ergonomic र आधुनिक हेडसेट को चयन को लागि सुझावहरु
महिला टी-शर्टहरू - छविहरूको विभिन्न प्रकारका एक फैशनेबल अतिरिक्त
उच्च कमर संग पेंसिल स्कर्ट
सूखे अन्जी - उपयोगी गुणहरू
रिबनको माई हेराइमा कपाल
IVF पछि प्राकृतिक गर्भावस्था
छाला हेरचाहको लागि मतलब
पैसाको रूखले किन पातहरू बहाउँछ?
समुद्री काल - राम्रो
के पहेंलो शर्टहरू लगाउने?
खाद्य पदार्थहरुमा भिटामिन बी 3
हातमा छुटकारा दिनुहुन्छ
अनुहारमा सेतो धब्बा
कसरी सही mink कोट छनौट गर्ने?
केट मिडलटन र प्रिंस विलियम बगैचा पार्टीमा रूख लगाए
तपाईं किन एक प्रिय संग एक झगडा छ?